चुनावको बेला नागरिकलाई छारो हाल्ने काम बन्द हुनु पर्छ | Esajhakura
गृह पृष्‍ठ कपिलबस्तु चुनावको बेला नागरिकलाई छारो हाल्ने काम बन्द हुनु पर्छ
चुनावको बेला नागरिकलाई छारो हाल्ने काम बन्द हुनु पर्छ
प्रकाशित मिति : २०७९ बैशाख ८ , बिहीबार ०८:३७
भगवती न्यौपाने,कपिलवस्तु ।
बैशाख ३० का लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब २२ दिन बाँकी छ । आसन्न स्थानीय तहको चुनावको चहलपहल शहर देखि ग्रामीण भेगसम्म पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यतिबेला ग्रामीण भेगमा मतदाता रिजाउनमा व्यस्त देखिन्छन । भेटघाट, टोल कमिटी विस्तार लगायत चुनावी अभियान लिएर केन्द्रिय नेताहरु गाउँसम्मै पुगेका छन । स्थानीय तह जितेर जिल्लामा बलियो स्थान कायम गर्न कुनै कसर छाडेका छैनन् ।
टोल,गाउँ समाज,नगर हुदै प्रदेश केन्द्र सम्म चुनावको रौनक चलिरहेको छ । यति मात्रै होईन चौतारा,बाटो घाटो देखि घरपरिवारमा पनि चुनाबका कुरा चलिरहेका छन् । नेताहरुले आ–आफना पाटीले गरेका कामको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका छन् । यति मात्रै होईन एक पाटीले अर्को पाटीलाई आरोप प्रत्यारोप गर्न समेत छाडेका छैनन् । उता पाटीमा कुन प्यानलको कसलाई उठाउदा पाटीको जित सुनिश्चितता हुन्छ भनेर केन्द्र देखि स्थानीय नेताहरुको लबिङ र दौडधुप चलिरहेको छ ।
जिल्लास्तर र केन्द्रका नेताको गाउँ प्रवेशलाई भने सर्वसाधारणले सकरात्मक रूपमा लिएका छैनन् । आफूलाई भोटको आवश्यकता परेका बेला मात्रै गाउँमा आउने राजनीतिक दलका नेताको प्रवृत्तिले सर्वसाधारण रुष्ट भएका छन्।् । जनताको योजना प्राथमिकतामा नराखेर पहुँचका आधारमा आएका योजना र गएको निर्वाचनमा पाएका आश्वासन पूरा नभएपछि कतिपय सर्वसाधारण विरक्तिएका छन । जनतालाई आवश्यक परेको बेला विभिन्न राजनीतिक दलले राहतको नाममा राजनीति गरेका स्थानियको भनाई छ ।
कोरोना सङक्रमणको बेला खान नपाएर कति नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउन परेको बाध्यता ताजा छ । हातमा सिप दक्षता र शैक्षिक प्रमाणपत्र हुँदा हुदै पनी रोजगारीको शिलशिलामा बैदेशिनु परेको नेपालीको पीडा कसले बुज्ने जस्ता अनेकौ प्रश्न खडा भएका छन् । यति मात्रै होईन जतिवटा चुनाव आए पनि जति नेता फेरिए पनि, एजेण्डा फेरिए पनि जनताका दुख पीडाहरु अझै उस्ताका उस्तै छन् । दिनप्रतिदिनको जघन्य घटनाले महिलाहरु समाजमा सुरक्षित छैनन् । आफ्नै परिवार र आफन्तीबाट बलत्कारका शिखार हुन बाध्य छन् ।
जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान हाम्रो समाजमा निकै प्रचलित छ । अहिले देशको चुनवी राजनितिमा पनि यो उखान चरितार्थ छ । राजनीतिक दलका नेताले जनतालाई पटक पटक सिँगापुरे आवश्वासन देखाएर लिएका भोट निर्वाचित भएपछि चटकक्कै विर्सने परिपाटीले दल र दलभित्रका एजेण्डा र चुनावमा तम्तयर बनेका उमेद्धारका अनुहार उक्त उखानले अझ स्थान पाएको छ ।
चुनावको बेलामा मात्रै नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम बन्द हुनु पर्छ त्यसैले भाषण होईन काम गरेर व्यहारमा देखाउने नेताको देशलाई आवश्यक परेको छ । भाषण र कागजमा भन्दा विकास, दिनदिनै बलत्कारका शिकार हुन बाध्य भएका ५ महिने बालिका देखि ७० वर्षको जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा, देशमै रोजगारी, कृषिमा योगदान, गाउँमा खानेपानी, बाटो तथा स्वास्थ्यको अवस्था सुधार, जनताको ज्यानको सुरक्षा, रोजगारीको प्रत्याभुति गराउने, असाहय अपाङको पिडा बुज्ने नेताको अहिले देशमा खाचो छ । त्यसैले नागरिकको चाहनाअनुसार काम गर्ने जनप्रतिनिधि आउन सक्नु पर्छ ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका बेला गाउँगाउँमा देखाएका सपना र महत्वाकांक्षी आश्वासन बाँडेका दलहरुले यसपाली कस्ता योजना अघि सार्दैछन् त ? के फेरि तिनै अघिल्लो निर्वाचनमा लेखिएका किताबी एजेण्डाका बुँदाहरुलाई कपि पेस्ट गरी नयाँ कभर पुस्तकमा आफ्ना अनुहार टासेर पुराना एजेण्डा सहित जनता सामु जालान ? एजेण्डा पुरानो होस् तर जनताले विकासको अनुभुति गर्न पाउनुपर्छं ।
जनप्रतिनिधि भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिने मान्छे नै जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ । जसले त्यहाँका अवस्थाको बारेमा अर्थात् स्थानीय तहमा कस्तो विकासको आवश्यक्ता छ त्यहीअनुसारको बुझ्ने जनप्रतिनिधि आउनु पर्छ ।
अब फेरी तिनै पुराना एजेन्डा बोकेका तर काम भने गर्न नखोज्ने नेतालाइ यो चुनाबमा जनताले जिताउछन या त देशको लागी समाजको लागी राम्रो सोच्ने नेताहरु अगाडी आउँछन त्यो भने हेर्न बाकी रहेको छ ।
यसो भनि रहर्दा तीनै तहको सरकार बनेपछि विकास नभएको त होईन केहि ठाउँले मुहार फेरका छन् तर अझै धेरै ठाउँको अवस्था उस्तै छ । यता केहि नेताहरु पनि जनताको नजरमा विकास प्रेमि र जनता मुखि भएको पनि देख्न सकिन्छ । अब आउने आगामी चुनाबमा त्यस्तै जनताले रुचाउने जनप्रेमि नेताको आवश्यक परेको देख्निन्छ ।
अन्त्यः चुनावको बेला बाहेक गाउँमा नछिर्ने नेताको यस्तो प्रवृतीले गर्दा ५ वर्ष अगाडी पाटीले उठाएका एजेण्डा पुरा गरेको छ कि छैनन् ? भन्ने प्रश्नको समिक्षा हुनु पर्ने बेला भएको छ । चुनाबको २ दिन अघि सम्म विकास प्रेमि र जनप्रेमि नेताको आवश्यकता छ भन्दै चोकचोकमा बहस गरीरहने जनताहरु आफु नविकुन र असल नेतालाई विजय गराउन तपाई हामी सबैलाई शुभकामना ।
पछील्लो पोस्ट इ–सेवाको ‘डिजिटाईजिङ्ग नेपाल’ कपिलवस्तुमा सम्पन्न
अगिल्लो पोस्ट कपिलवस्तुकाे शमशेरदल गणमा कार्यरत सिपाही कोपिला राजवंशीको मृत्यु